Le Rock @ Albion - I-Airbnb
Black River, Mauritius, i-Mauritius
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Michael & Melissa
Lesi sakhiwo sitholakala ku-Splendid view Beau Soleil, itholakala emaphethelweni aleli dolobhana elizolile lase-Albion ogwini olusentshonalanga futhi linikeza umbono omuhle wolwandle.
Indawo Enhle Yokufikela yabathandi bolwandle, abadlali begalofu nosomabhizinisi iyenza ibe indawo ekahle yokuhlala. Le ndawo yokuphumula & ezolile inazo egcekeni layo Inkundla Yethenisi nedamu lokubhukuda elingaphandle elihle labantu abadala nezingane.
I-WiFi iyatholakala MAHHALA. Umsingathi angakwazi ukuhlela Isidlo sakusihlwa ngobusuku bokuqala uma ecelwe ekubhukheni .
Le bungalow inamagumbi okulala ama-3 anomoya opholile, anamagumbi okugezela ama-2 futhi ifakwe ikhishi elisebenza ngokugcwele, igumbi lokudlela kanye negumbi lokuhlala elithokomele. Indlu inikeza ithala elinendawo enhle yokosa inyama.
Uzothola umuzwa wokuthi ukude ngamamayela kude nezindawo zokuvakasha. Nokho, le bungalow enhle iqhele ngemizuzu emi-5 kuphela ukusuka ogwini nolwandle lwayo oluhle, amathala nezindawo zokudlela. Phakathi nemizuzu eyi-10 ungaba maphakathi nedolobhana elijabulisayo laseCascavelle, lapho kutholakala khona inxanxathela yezitolo yesitayela esihle sesiqhingi futhi iseduze neFlic en Flac Beach kanye nempilo yasebusuku. Amadolobhana ase-Albion naseCascavelle anezitolo ezimbalwa zegrosa yansuku zonke kanye nezinhlobonhlobo zezindawo zokudlela ezinhle zama-franchise. I-Casela Nature Park iyimizuzu eyi-15 kuphela futhi inhloko-dolobha yaseMauritius, iPort Louis iqhele ngamakhilomitha ayi-13.6.
Umnikazi angakwazi ukunakekela izimoto eziqashisayo/izithuthuthu, izinkambo, ukudla neziphuzo ukulethwa njll. Awudingi ukuthatha noma yini nawe, nje isudi yakho yokubhukuda! Imibhede isilungile, amathawula ekamelweni ngalinye, ukuhlanza indlu ngemva kokuphuma kuhlanganisiwe, ukushintsha imibhede namathawula kanye ngesonto. Awudingi ukuletha amathawula ogwini, ayatholakala. Umsizi wasendlini angatholakala uma eceliwe ngenkathi ubhukha. Izilimi ezikhulunywayo zihlanganisa isiNgisi, isiFulentshi nesiPutukezi.
Umnikazi angakwazi ukunakekela izimoto eziqashisayo/izithuthuthu, izinkambo, ukudla neziphuzo ukulethwa njll. Awudingi ukuthatha noma yini nawe, nje isudi yakho yokubhukuda! Imibhe…